CG Archives - Technology Khabar
काठमाडौं । सिजी ईलेक्ट्रोनिक्सले हात्तिगौंडामा आफनो नयाँ सिजी डिजीटल मल्टिब्रान्ड शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले सिजीका उत्पादन सहजरुपमा ग्राहक समक्ष पुर्‍याउने उद्धेश्यले सिजी डिजीटल मल्टिब्राण्ड शोरुम विस्तार गर्दै आएको […]
काठमाडौं–सिजीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशबाट टिभी ल्याउने व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग गरेको छ । नेपालमा सीजी टेलिभिजन उत्पादन गर्दै आएको सीजी इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीले विदेशबाट आउँदा टिभी ल्याउने व्यवस्था हटाउन […]
सिजीले बजारमा ल्यायो नयाँ मोडलका फ्रिज, १२ घण्टासम्म खानालाई स्वच्छ र ताजा बनाउने
काठमाडौं। इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सिजीले नयाँ मोडलका आकर्षक एवं गुणस्तरयुक्त फ्रिजहरु बजारमा ल्याएको छ । ग्राहकहरुलाई मध्य नजर गरि कम्पनीले बजारमा ल्याएका उक्त फ्रिजहरुमा ५ वर्षको वारेण्टी सहित विभिन्न अकर्षक उपहार […]
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०७५ सालमा सिजीले आफ्ना ग्राहकहरुमा विभिन्न सामानहरुको खरिदमा आकर्षक र उपयोगी योजनाहरु बजारमा ल्याएको छ। सिजी नगदमा गदगद् नामक सो योजनामा अब ग्राहकले सिजीका सामानहरु खरिद […]
काठमाडौं, १५ फागुन । सिजी मोबाइल्सले बजेट सेगमेन्टको दुई नयाँ स्मार्टफोनहरु ओमेगा ३ र ब्लेज एन सार्वजनिक गरेको छ । ओमेगा ३ बेजेल लेस डिस्प्ले र १८ः९ डिस्प्ले रेसियोका साथमा […]
सिजी एसेसरिजले ल्यायो ब्लूटूथ हेडसेट-‘सिजी पल्स’, सबै डिभाइसमा प्रयोग गर्नसकिने
काठमाडौं, २४ माघ । सिजी मोबाइल्सले सिजी पल्स (CG PULSE) नामक वायरलेस हेडसेट लोकप्रिय सिजी एसेसरिजको रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । गित र अडियोका लागि विशेषरुपमा डिजाइन गरिएको यो हेडसेट, […]
पोखरा, २२ माघ । सिजी मोबाइल प्रालिले सिजी र मेजु मोबाइलको रिटेलरहरुबीचको रिटेल भेटघाट कार्यक्रम बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा पोखराका करिब ८० जना व्यवसायीहरु सहभागी भएको सिजी […]
काठमाडौं, १२ मंसिर । सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले १० वर्षे वारेन्टी भएको वासिङ्ग मेसिन नेपाली बजारमा ल्याएको छ । सिजीले आफ्ना ग्राहकको माग र चाहनालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न आकर्षक स्वरुप तथा विशेषताहरु […]
काठमाडौं, ४ मंसिर । सिजी ब्राण्डले ३ नयाँ मोडलका इलेक्ट्रीक वाटर हिटर बजारमा ल्याएको छ । सिजीका हिटरहरु १०, १५ र २५ लिटरमा उपलब्ध छन् । हिटरमा अर्थ लिकेज सर्किट […]
काठमाडौं, ११ भदौ । नेपाली इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सि.जी. ले हालै नयाँ तथा आकर्षक दुईवटा मोडलका वासिङ्ग मेसिनहरु बजारमा ल्याएको छ । सो वासिङ्ग मेसिनहरु ७ केजी र ८ केजी मा […]
काठमाडौं, १६ चैत । चौधरी ग्रुपको इओएल प्रालीले बजारको बढ्दो प्रदुषणलाई मध्यनजर गर्दै केन्ट म्याजिक कार प्युरिफाइर बजारमा ल्याएको छ । यसले कारभित्र शुद्ध र स्वच्छ हावा पाउन मद्धत गर्ने […]
काठमाडौं, ३० फागुन । सिजि मोबाईलले एस्ट्रो सिरिज अन्तर्गतको नयाँ मोडेल एस्ट्रो टर्च बजारमा ल्याएको छ । यो नयाँ फिचर फोनमा ३६ सय एमएएचको अत्यन्तै लामो समय टिक्ने ब्यट्रि ब्याकअप […]
सिजी ब्राण्डको दशौं वार्षिकोत्सव, ६५ इन्चकाे यूएचडी टिभी सार्वजनिक
काठमाडौं, १६ माघ । सिजी ब्राण्डको दशौं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सिजीले काठमाडौंमा राष्ट्रिय स्तरको पार्टनर्स मिट सम्मेलन आयोजना गरेको छ । पार्टनर्स मिटमा देशभरबाट ३ सय भन्दा बढी डिलरहरु सहभागी […]
सिजी डिजिटलको ब्ल्याक फ्राइडे, स्मार्टफोन र इलेक्ट्रोनिक्स सामाग्रीमा ४७ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं, १० मंसिर । सिजी डिजिटलले (CG Digital) ब्ल्याक फ्राइडेको अवसर पारेर आफ्ना विभिन्न उत्पादनहरुमा छुट दिएको छ । सिजी इलेक्ट्रोनिक्सद्धारा स्थापना गरिएको सिजी डिजिटलमा आजदेखि ब्ल्याक फ्राइडेको अवसर पारेर […]
काठमाडौं, २९ भदौ । एलजीले विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स तथा घरायसी सामग्री खरिद गर्दा हात खाली नजाने उपहार योजना ल्याएको छ। लेट्स टुगेदर सेलेब्रेट वीथ एलजी’ नाराका साथ कम्पनीले टेलिभिजन, स्पीकर, रेफ्रिजेरेटर, […]
काठमाडौं, १४ साउन । नेपालको प्रमुख इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी सिजीले नयाँ स्मार्टफोन मोडल बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सिजी इओन सिरिजको नयाँ स्मार्टफोन सिजी इओन ब्लेज गोल्ड (CG EON Blaze […]
सिजीको नयाँ वर्षका लागि ‘क्यासमा क्यास ब्याक’ योजना
काठमाडौं, २६ चैत । सि.जी. ले नयाँ वर्ष २०७३ को उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ । सि.जी. ब्राण्डको एक दशकको सफलता तथा नयाँ वर्ष २०७३ को शुभअवसरमा क्यासमा क्यास ब्याकको […]
काठमाडौं, २१ चैत । एलजी ब्राण्डले एलजी स्मार्ट सेलेब्रेसन (LG Smart Celebrations) नामक नयाँ योजना बजारमा ल्याएको छ । एलजीका हरेक सामग्रीको खरिदमा निःशुल्क उपहारहरु प्रदान गरी ग्राहकको जीवनमा भिन्नता […]
काठमाडौं, १५ माघ । नेपालका लागि एलजी ब्राण्डको आधिकारी बितरक सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले सिभिल मलमा नयाँ शोरुम संचालनमा ल्याएको छ । एलजीको रिटेल स्ट्याडण्र्डलाई पुन परिभाषित गर्दै एलजीको लाइफ स्टाईल शोरुम […]
काठमाडौं, १२ मंसिर । चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी इम्पेक्स प्रालीले सिजी ब्रान्डमा ड्रम टाइपको नयाँ भ्याकुम क्लिनर बजारमा ल्याएको छ । १६ सय वाट क्षमताको यस भ्याकुम क्लिनरको बजार मूल्य ८ […]